Barcelona Oo Isku Diyaarinaysa Inay Robert Lewandowski U Soo Bandhigto Heshiis Afar Sano Ah.
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo isku diyaarinaysa inay Robert Lewandowski u soo bandhigto heshiis afar sano ah.
March 25, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarinayso in ay weeraryahan khad hexe ee Bayern Munich Robert Lewandowski u soo bandhigto heshiis afar sano ah si uu ugu soo dhaqaaqo Camp Nou xagaagan.
33-sano jirkaan ayaa markale qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay kooxdiisa Jarmalka xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 45 gool, waxaana uu diiwaan geliyay afar caawin 37 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Mustaqbalka Lewandowski ee Allianz Arena ayaa weli su’aal la gelinayaa, inkastoo qandaraaskiisa Munich uu dhacayo June 2023.
Manchester United iyo Liverpool ayaa labaduba dhawaanahan lala xiriirinayay inay u dhaqaaqayaan weeraryahanka, kaasoo dhaliyay 339 gool, islamarkaana loo diiwaan geliyay 69 caawin 366 kulan oo uu u saftay Bayern tartamada oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Sport , waxaa sidoo kale jira xiiso weyn oo ka imaanaya Barcelona, ​​iyadoo kooxda Catalan ay dooneyso inay lasoo saxiixato weeraryahan cusub inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda Xavi ay rajeyneyso inay weyso heshiiska Erling Braut Haaland waxayna bedelka u calaamadsadeen Lewandowski.